ရေသန့်စင်ရန် UV LED မီးခွက်များ→ Acuva •ရွက်လှေများ• Campers • House
ခရမ်းလွန် LED မီးခွက် - ထိရောက်သောနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူသောအကြောင်းကိုလေ့လာပါ တော်လှန်ရေး ရေသန့်စင်နည်းပညာ
အဲဒါကို filter ကိုဖြတ်ပြီးဘာမှမလုပ်ဘူး ဒီကိစ္စမှာ, ရေသန့်ရမည်ဖြစ်သည်စစ်ထုတ်ရုံသက်သက်မဟုတ်ပါ။
ရေမစစ်ပါနှင့် - ဒါကြောင့်သန့်ရှင်းရေး!
သန့်ရှင်းခြင်း၊ ကုသခြင်းသို့မဟုတ်ပိုးသန့်ဆေးခြင်းဟာရှုပ်ထွေးနေပုံရတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ဓာတုပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
၎င်းတို့ထဲမှအများစုသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ အထူးသဖြင့်ရေနေသတ္တဝါများကိုဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်သည်။ ငါတို့သည်လည်းဓာတုပစ္စည်းများနှင့်အတူကိုယျ့ကိုယျကိုအဆိပ်သင့်ခြင်းနှင့်ဆေးဆိုင်၏အတွင်းပိုင်းဆင်တူတဲ့အနံ့နှင့်အတူမတတ်နိုင်သောရေကိုမစားချင်ကြဘူး။
သငျသညျအိုဇုနျးနိုငျသညျ။ အိုဇုန်းလွှာကုသမှုသည်ထိရောက်စွာသန့်စင်ပေးပြီးရေအရသာနှင့် ပတ်သက်၍ ကြားနေသည်။ သို့သော်အိမ်၌ရေ ozonation ကိုစိတ်ကူးရန်ခက်ခဲသည်။
ထို့ကြောင့်အိမ်တွင်ရေသန့်ရှင်းရေး၊ စခန်းချနေရာ၌၊ ရွက်လှေ၊ ရုံးခန်းနှင့်ဆိုင်များတွင်မည်မျှလျင်မြန်စွာ၊ စျေးပေါပေါ၊
Acuva ခရမ်းလွန် LED မီးသီး
ငါတို့သည်သင်တို့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ကုမ္ပဏီတင်ပြ Acuva။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Acuva ထုတ်ကုန်များကိုသီးသန့်တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပြီးပိုလန်ဈေးကွက်တွင်ရှိသည်။
Acuva သည်ရေသန့်စက်များအသုံးပြုသည် ခရမ်းလွန် LED မီးခွက်။ ဤရွေ့ကားကနေဒါဒီဇိုင်းနောက်ဆုံးပေါ်မျိုးဆက်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည်။
ရေသန့်စင်ခြင်း Acuva စနစ်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပင်ဖြစ်သည် ယှဉ်ပြိုင်မှုနည်းလမ်းများအသုံးပြုခြင်းထက်အဆ ၁၀၀ ပိုထိရောက်သည်.
ထို့အပြင်၏အသုံးပြုမှုကို ခရမ်းလွန် LED မီးခွက် Acuva ၏ထုတ်ကုန်များကိုအိမ်နှင့်ရုံးအတွက်သာမကအကောင်းဆုံးရွက်လှေကိုရွက်လှေပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မော်တော်ကားအိမ်တစ်ခုအတွက်ကောင်းမွန်စေသည်။
Acuva UV-LED ကို အသုံးပြု၍ ရေသန့်စက်ခြင်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့်အလွန်ဂေဟစနစ်အပေါ်အခြေခံသည်။ ရေထဲသို့ကလိုရင်းကဲ့သို့သောဓာတုပစ္စည်းများမထည့်သွင်းပါ။
Delete ဘက်တီးရီးယားများ၏ 99,9999% ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ရောဂါပိုး
ရလဒ်အနေဖြင့်ရေသည်ပိုးသန့်ဆေးခံရသည် ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်အခြားရောဂါပိုး ၉၉.၉၉၉၉% ကိုဖယ်ရှားပစ်ပါသည်၎င်းသည်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေပြီးမည်သည့်ရိုးရာရေစစ်စက်ကိုမဆိုအလွယ်တကူရနိုင်သည်။
Acuva UV LED ရေသန့်စက်ကို အသုံးပြု၍ ရေများ၌ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်များသို့မဟုတ်အဏုဇီဝသက်ရှိများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖျားနာမည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲတောင်တန်းများနှင့်ရေကန်များမှရေကိုလောင်ကျွမ်းနိုင်သည်။ ခရမ်းလွန် LED မီးခွက် ဗိုင်းရပ်စ်, မျိုးကွဲများအပါအဝင်သတ်လိမ့်မည် SARS-COV-2အစာအိမ်ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုဘက်တီးရီးယား။
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သုံးမီးခွက်များကို အသုံးပြု၍ ရေသန့်စင်ခြင်းသည်၎င်း၏အရသာကိုမထိခိုက်ပါ။ ဗက်တီးရီးယားများ၊ ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ရောဂါပိုးများသေဆုံးသော်လည်းရေဖွဲ့စည်းမှုသည်မပြောင်းလဲပါ။ အဘယ်သူမျှမပစ္စည်းဥစ္စာမိတ်ဆက်ဒါကြောင့်ရေကိုမသန့်ရှင်းမီကကဲ့သို့အတိအကျအတူတူပင်အရသာ။ အနံ့နှင့်အရောင်လည်းမပြောင်းလဲပါ။ Acuva ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သန့်စင်စက်သည်ရေနှင့်အတူအခြားမည်သည့်အရာမျှလုပ်ဆောင်သော်လည်း၎င်းကိုထွန်းလင်းစေသည်။
ရေသန့်စင်ခြင်းတွင်၎င်းကို ၂၅၀ မှ ၂၈၀ မှ nm အထိတိုသောလှိုင်းအလျားများဖြင့်ကုသခြင်းပါဝင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောထိတွေ့မှုကြောင့်ရေထဲ၌နေထိုင်သောအဏုဇီ ၀ သက်ရှိများ၏ဒီအင်အေကိုပြိုကွဲစေသည်။ ရလဒ်အနေနှင့်ရေသန့်စင်သွားသည်။ ၉၉.၉၉၉၉% သောဗက်တီးရီးယားများ၊ ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်အခြားရောဂါပိုးများသေဆုံးသည်။
ခရမ်းလွန်မီးချောင်းများကို အသုံးပြု၍ ပိုးသန့်ဆေးနည်းပညာများသည်အထူးသဖြင့်အထူးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုခံနေရပြီးစီးပွားရေးနေရာအနှံ့အပြားတွင်မကြာခဏအသုံးပြုသည်။
Acuva UV LED systems ကိုအသုံးပြုရတာအလွန်ရိုးရှင်းပါတယ်။ ရှုပ်ထွေးတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုကိုင်တွယ်စရာမလိုပါဘူး။ ဘာမှမသတိရဖို့မလိုပါဘူး Acuva UV LED ရေသန့်စက်များကိုသာမန်ထိပုတ်ပါကအသုံးပြုသည်။
ထို့အပြင် Acuva UV-LED ရေသန့်စင်စနစ်များသည်အရွယ်အစားသေးငယ်သည်။ သူတို့ဟာနေရာသိပ်မယူတဲ့အတွက်ကုန်တင်ကားတွေ၊ စခန်းချသူတွေ၊ သင်္ဘောတွေ၊ လှေတွေ၊
၄ င်းတို့ကိုနွေရာသီအိမ်များ၊ စျေးဆိုင်များ၊ ရုံးများ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်တစ်အိမ်တည်းနှင့်မိသားစုပေါင်းစုံအိမ်များတွင်အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သည်။
ရေစစ်စက်များနှင့်မတူဘဲ UV-LED မီးအိမ်များသည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။
သင်ဘာမှသန့်ရှင်းအောင်လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး။ အဘယ်အရာကိုမျှတက်ပိတ်ဆို့။ filter filter များညစ်ညမ်းမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဤတွင် UV-LED မီးခွက်သည်ရေပေါ်တွင်ထွန်းလင်းနေသည်။
LED fluorescent lamp များအသုံးပြုခြင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရေကုသမှုစနစ်တစ်ခုလုံး၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကင်းသောလည်ပတ်မှုအပေါ်ကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
Acuva Arrow5ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် - LED - ထိပုတ်ပါသောရေသန့်စက်
ဒါဟာတာရှည်အာမခံနှင့်တစ်သက်တာရှိပါတယ်။ သမားရိုးကျမီးသီးများကိုပုံမှန်ပြန်လည်အစားထိုးရန်လိုအပ်သည်။ LED fluorescent lamps များသည် ၁၀ နှစ်သက်တမ်းအာမခံချက်ရှိသည်။ အပူမပေးပါ၊ မီးဖွင့်ပြီးနောက်ချက်ချင်း အလုပ်လုပ်၍ မီးမရှို့ပါ။
သမားရိုးကျနည်းပညာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမီးခွက်များနှင့်မတူဘဲ Acuva UV-LED ထုတ်ကုန်သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောကြောင့် LED မီးလုံးများတွင်ပြဒါးမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Acuva Arrow5UV-LED - ရေသန့်စက်
UV-LED သည်ရိုးရာမာကျူရီမီးသီးများပေါ်တွင်အခြေခံထားသော UV စနစ်ထက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုအလွန်နည်းသည်။ Acuva UV-LED စနစ်များကိုဘက်ထရီများဖြင့်အသုံးပြုရန်အတွက်အဆင်ပြေသည်။ ၎င်းတို့ကို 12V power supply အပြင် AC DC နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
Acuva သည်အသုံးပြုမှုအားလုံးနီးပါးနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသောထုတ်ကုန်များကိုပေးသည်။ UV-LED ရေသန့်စက်များ၏ကျယ်ပြန့်မှုမှသင်သည်ဥပမာပစ္စည်းများကိုတစ်မိနစ်လျှင်5လီတာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း 900 လီတာနှင့်အတူပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
Acuva Eco NX-Silver ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အလင်းရောင် - ထိပုတ်ပါသောရေသန့်စက်
သင်၏ရွက်လှေသို့မဟုတ်ယာဉ်တန်းရှိရေပုလင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်မပူပါနှင့်။ Acuva UV-LED ပိုးသန့်ဆေးစနစ်ကို အသုံးပြု၍ သောက်ခြင်းမပြုမီ off-line ရေကိုသုံးပါ။ သင်၏လှေပေါ်တွင်နှင့် RV သို့မဟုတ်အားလပ်ရက်အိမ်များတွင်ရေမပါဘဲအစက်မရှိသောသန့်ရှင်းသောရေကိုသုံးပါ။
ရေသန့်စင်စနစ်များရွေးချယ်ခြင်း Acuva သင်၏အိမ်၊ လှေသို့မဟုတ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်အတွက်အသန့်ရှင်းဆုံး၊ မြုံနေသောရေကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုသင်ရွေးချယ်ပါ။
ခရမ်းလွန် LED မီးခွက် vs. ခရမ်းလွန်မီးခွက်များ
သမားရိုးကျခရမ်းလွန်ရေကုသမှုနည်းစနစ်တွင်ခရမ်းလွန်မီးချောင်းများအသုံးပြုသည်။ သို့သော်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများနှင့်ခရမ်းလွန်မီးလုံးများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အလေးအနက်စိုးရိမ်မှုများရှိနေသည်။
5 /5(3မဲ )
acuvaacuva ecoacuva eco uv ဦး ဆောင်ခဲ့သည်acuva ဦး ဆောင်သောခရမ်းလွန်ရေသန့်စင်စနစ်acuva သန့်စင်စနစ်acuva နည်းပညာများacuva နည်းပညာများ incAcuva ခရမ်းလွန် LEDacuva ခရမ်းလွန်ရေသန့်စက်acuva ရေacuva ရေ filter ကိုacuva ရေသန့်စင်မှုစနစ်acuva ရေသန့်စက်acuva ရေကုသမှုစနစ်များAllegro ခရမ်းလွန်မီးအိမ်ပိုးသတ်ဆေးခရမ်းလွန်ဆီမီးခွက်ခရမ်းလွန်ပိုးသတ်ဆေးဆီမီးခွက် LEDရေအတွက်ပိုးသတ်ဆေးခရမ်းလွန်မီးခွက်များဇီဝဗေဒရေသန့်စင်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ဦး ဆောင်သောမီးခွက်များသည်အန္တရာယ်ရှိသည်ဖြစ်စေခရမ်းလွန်မီးခွက်များအန္တရာယ်ရှိဖြစ်ကြသည်ခရမ်းလွန်ရေပိုးသန့်ဆေးရေကုသမှုပိုးသန့်ဆေးရေပိုးသန့်ဆေးရေပိုးသန့်ဆေးနည်းလမ်းများသောက်သုံးရေပိုးသန့်ဆေးခရမ်းလွန်ရေပိုးသန့်ဆေးသောက်သုံးရေတင့်ကားများပိုးသန့်ဆေးပြည်တွင်းရေသန့်စက်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သုံးရေစုပ်စက်ပိုးသတ်ဆေးမီးခွက်ဦး ဆောင်နှင့်ခရမ်းလွန်မီးခွက်ဆီမီးခွက် UV ဓါတ်ရောင်ခြည်ဦး ဆောင်ခရမ်းလွန်မီးခွက်ဦး ဆောင်ခရမ်းလွန်မီးခွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းခရမ်းလွန်မီးခွက်များခရမ်းလွန်သို့မဟုတ် led မီးခွက်ရေအတွက်ခရမ်းလွန်မီးခွက်များခရမ်းလွန်နှင့် ဦး ဆောင်မီးခွက်ခရမ်းလွန်မီးခွက်များuv led lamps ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရေထဲမှာ ဦး ဆောင်ခဲ့သည်အကောင်းဆုံး ဦး ဆောင်ခရမ်းလွန်မီးခွက်အကောင်းဆုံးခရမ်းလွန်မီးခွက်ရေသန့်စင်မိုးရေကုသမှုသောက်သုံးရေသန့်စက်မှုရေကုသမှုရေသန့်စင်ရေးရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအိမ်ရေသန့်စင်ရေတွင်းထဲမှာရေသန့်စင်ကိုထိပုတ်ပါရေ၏သန့်စင်ရေတွင်းများမှရေသန့်စင်ရေသန့်စင်ခရမ်းလွန်ပိုးသတ်ဆေးခရမ်းလွန်ရေသန့်စက်uv ဦး ဆောင်ရေသန့်စက်ခရမ်းလွန်ရေကိုကုသခဲ့သည်ခရမ်းလွန်ရေကုသမှုစနစ်များခရမ်းလွန် ဦး ဆောင်သောရေသန့်စင်ခြင်းရေသန့်ကုမ္ပဏီnsf အသိအမှတ်ပြုဘာကရွက်လှေပေါ်တွင်ရေအဆိုပါ motorhome အတွက်ရေခရမ်းလွန်ဆီမီးခွက်များအတွက်မီးသီး ဦး ဆောင်ခဲ့သည်ခရမ်းလွန်ဆီမီးခွက်များအတွက်မီးသီး ဦး ဆောင်ခဲ့သည်